Efijery SOLASOLV & lamba lamba ROLASOLV lamba / jiro mainty
The Solution SeeGoing
Ho an'ny fiarovana saferika®
Fireharehan'ny alikaola sy ny varavarankely an-dranomasina ho an'ny sambo, sambo, solika, tilikambo ATC
Hizaha ny vokatra Get ny notsongaina
manome Mihamahazo ny varavarankely ary Ny jiro Blackout jiro ho an'ny sambo sy ny sambo mpiantoka
45 + taona
181,940 Vita ny varavarankely
18,900 Basy vita
SOLASOLV® ary ROLASOLV®
ny mason'ny fantsom-bokatry ny masoandro amin'ny masoandro
Ny marika SOLASOLV® no hany maso-masoandro manjelanjelatra manelatselatra eran'izao tontolo izao izay Type Approved ho an'ny fampiasana an-dranomasina ataon'ny VATO eken'ny karazana fankatoavana lehibe - Lloyds, DNV, ABS ary RINA. Ny efijery roller SOLASOLV® dia fanampiana azo antoka rehefa apetraka amin'ny varavarankely fitetezana. Fantatra amin'ny anarana hoe jamba koa.
Ny marika ROLASOLV® an'ny Fabric Blackout Roller Blinds dia Flame Retardant. ROLASOLV® Roller Shades no marika tokana eto amin'izao tontolo izao karazana nankatoavina ampiasaina amin'ny karazan-tsambo an-dranomasina rehetra. Ny alokaloka ROLASOLV® dia manova ny andro ho alina manampy ny mpiasa an-tsambo, ny vahiny ary ny tompony hahazo fialan-tsasatra sarobidy ary misy loko maro loko mifanaraka amin'ny haingon-trano anatiny.
ho an'ny tontolo iainana miadana sy azo antoka kokoa
Fampahalalana bebe kokoa • Fangatahana santionany sy santionany
Solar Solve dia iray amin'ireo mpamatsy lehibe indrindra manerantany Flames of Retardant Sunshades & Ny varavarankely an-dranomasina Ho an'ny sambo, ny sambo, ny solika, ny tilikambo ATC. Ny andian-tsika manontolo dia misy ny Sehatry ny Glare Anti, ny jiro mitandriam-bidy, ny jiro mena, ny jiro manokana, ny jiro mivezivezy sy ny sarimihetsika mipetaka sy ny sarimihetsika fanesorana.
Ny ROLASOLV® Flamenco Solarintsika dia ny TARAN-TANY AMIN'NY TONTOLON'ANDRIAMANITRA izay nekena ho ampiasaina amin'ny karazana sambo isan-karazany, fa ny solosainan'ny SOLASOLV® manohitra ny fitaratra amin'ny alàlan'ny sambo dia karazana fankatoavana ho an'ny fampiasana ny ranomasina amin'ny alalàn'ny karazana fanomezan-dàlana FOUR lehibe.
Miaraka amin'ny traikefa an-jatony nandritra ny taona 40 sy sambo an'arivony maro, Solar Solve dia orinasa iray azonao itokisana mba hanolotra ny kalitao avo indrindra marika masoandro ary jiron'ny varavarankely ary fomba iray tsy mifanentana amin'ny serivisy mpanjifa.
Ho fampahalalana bebe kokoa na teny nindramina ho antsika jairina an-dranomasina, mifandraisa aminay izao!